Valve Bag vatengesi uye fekitori - China Valve Bhegi Vagadziri
Non-dzakarukwa Large Capacity Po ...
Tsika Nhema Nharaunda ...
Ruvara Brown Bhegi Bhegi Na ...
Red Round Rope Art Kutenga ...
Isu tinopa dzakasiyana mhando dzekutakura. Mhando dzakasiyana dzekurongedza mumakemikari, kuvaka, kurima uye mamwe maindasitiri anogona kuwanikwa pano.
Polypropylene yakarukwa bhegi - bhegi iri rakasimba uye rakasimba fomu yekupakira yekuchengetedza uye kutakura zvigadzirwa. BOPP inoburitswa mumucheka, yakarukwa, uye ndokunamirwa pamapikicha emhando yepamusoro kupa mabhegi epamusoro-soro uye anoyevedza. Rudzi urwu rwekutakura kazhinji runokodzera chikafu uye chemakemikari zvigadzirwa kurongedza.
Valve bhegi - bhegi iri rakakodzera kumhanya-mhanya kuzadza zvigadzirwa zvehupfu kuti ugadzire yakachena uye isina guruva inoshanda nharaunda. Inowanzo shandiswa esimende uye kemikari kurongedza.
Square Pazasi Mabhegi - aya mabhegi akavhurika, akasonerwa pasi, uye anogona kushandiswa kune chikafu chemhuka, chikafu chekudya uye zvigadzirwa zvemaindasitiri.
Hombodo dzese dzinogona kudhindwa uye dzakagadziriswa, ingave yakarukwa bepa kana kraft bepa. Izvo zviri nyore kutakura, kuchengetedza uye kudzivirira kubva kune unyoro. Iyo ndiyo yakajairika kurongedza mumakemikari indasitiri, kurima uye mimwe minda.
50kg mapeji dzakarukwa Bags Laminated
Product Introduction Plastic dzakarukwa mumasaga akagadzirwa polypropylene (PP) sezvo huru mbishi zvinhu, extruded uye akatambanudza kupinda sandara filaments, uye ipapo dzakarukwa, dzakarukwa uye akaita mumasaga. Chikumbiro chekushandisa: 1. Kuisa mabhegi emiti yekumaindasitiri neyekurima: mune kurongedza zvigadzirwa zvekurima, mabhegi epurasitiki ave achishandiswa zvakanyanya mune zvigadzirwa zvemumvura kurongedza, kurongedza kwehuku yekuvhara, kufukidza zvigadzirwa zvemapurazi, mumvuri wezuva, mhepo uye chimvuramabwe pekugara pakudyara goho. , senge feed wo ...
25kg Putty Powder Seam Pasi Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Pazasi yakasonwa kurukwa kwekutakura mapurasitiki epurasitiki, makemikari, mukaka hupfu, samende, chikafu uye zvimwe hupfu. Yakanatswa chena kraft bepa kana yero kraft bepa rinoshandiswa panze uye epurasitiki rakarukwa jira rinoshandiswa mukati. Iyo epurasitiki inodzika PP inonyungudika kuburikidza neepamusoro tembiricha uye yakanyanya kumanikidza kukomputa kraft bepa uye epurasitiki rakarukwa jira pamwechete. Yemukati membrane bhegi inogona kuwedzerwa. Iko fomu repepa repurasitiki rakasanganiswa bhegi rakaenzana nekusona pasi nekuzarura homwe. Izvo ...
Kraft Pepa Rakarukwa Laminated Square Pazasi Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya. Pazasi pasi yakavhurika homwe yakavakirwa papepa repurasitiki rinoumbwa bhegi kana kraft bepa bhegi. Pazasi pehombodo inoenderana, yakapetwa uye yakanamatidzwa. Iyo rectangular mushure mekuzadza. Kunamatira yakasimba pasi pevha pepa kunogona kuwedzera simba. Dhizaini yepazasi yepasi inoita kuti bhegi muviri rigadzike uye harizopunzike kana uchizadza zvinhu. Iine hunhu hwekugadzikana kwakanaka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye nyore kuisira. Inonyanya kushandiswa muhupfu zvigadzirwa senge ...
5kG PP rakarukwa Rice Bhegi Nekubata
Chigadzirwa Nhanganyaya Pane maviri marudzi emupunga kurongedza mabhegi anowanzo shandiswa, imwe ndeye PE / PA inoumbwa yakapfava epurasitiki yekuzora kavha bhegi, uye imwe yacho polypropylene yakarukwa bhegi. Nekuti iyo yekupakira zvinhu ipurasitiki firimu, PE / PA yakapfava epurasitiki yekupakisha bhegi iri nyore kukwenya uye kubvarurwa nemupunga zviyo uye zvakapinza zvinhu panguva yekuzadza kana kutakura, izvo zvisingaiti kuchengetedza uye kutakura, saka inowanzo shandiswa kune vacuum kurongedza yemupunga pazasi pe10kg / 5kg, Wove ...
25,50 KG Yakadhindwa Mhuka Dyisa Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Kudya kwepakeji mabhegi anowanzo kuve akagadzirwa nemapolypropylene rakarukwa mabhegi, saka iwo anonziwo mabhegi ekudya. Kune marudzi mazhinji ezvikafu, uye kurongedza kunoshandiswa kuchave kwakasiyana. Mhando dzakajairika ndedzinotevera: 1. Hakajairika mabhegi akarukwa uye mabhegi eruvara anowanzo shandiswa kuzere kwemutengo, chikafu chegirini uye chikafu chehuku. 2. OPP firimu rakapetwa kaviri mabhegi, rimwe bhegi bhegi, bhegi remufirimu, nezvimwe zvinowanzoshandiswa kumubatanidzwa wekudya, hove yekudya uye yekuwedzera yekuwedzera. 3. OPP firimu rekudhinda ...
Yakakwirira Yemhando Yemhando Yekurima Kudya Mabhegi
Yakasungirirwa Kraft Pepa Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Pepa repurasitiki rinoumbwa bhegi, inozivikanwawo sevatatu mune rimwe rinoumbwa bhegi bhegi, idiki hombe mudziyo, uyo unonyanya kuziva unit kutakurwa ne manpower kana forklift. Izvo zviri nyore kutakura diki hombe hupfu uye granular zvinhu. Iine hunhu hwesimba rakakwirira, yakanaka isina mvura, chitarisiko chakanaka uye nyore kurodha uye kudzikisa. Iyo inozivikanwa uye inoshanda zvakajairwa kuputira zvinhu izvozvi. Maitiro Ekutsanangura: Yakanatswa chena kraft bepa kana kupopota ...
3 Dzinogara kraft bepa Block Pasi Ceramic Tile Glue Valve Bhegi 20kg
Chigadzirwa Nhanganyaya Ceramic tile glue inonyanyo shandiswa kunama zvedongo mataira, kumeso mataira, pasi mataira uye zvimwe zvekushongedza zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kwemukati nekunze madziro, pasi, dzimba dzekugezera, makicheni uye zvimwe zvivakwa. Zvinhu zvekuvaka zvakadai zvinoda kuchengetwa munzvimbo inotonhorera uye yakaoma. Iyo inowanzo shandiswa kurongedza ndeyevhavha bhegi kurongedza. Parizvino, iyo inowanzo shandiswa kuputira zvinhu zvedongo tile tile glue ndeyekwere pasi vharuvhu bhegi rakagadzirwa ...
PP rakarukwa Block Pasi Putty Powder Valve Bhegi 20kg
Chigadzirwa Nhanganyaya Putty poda mhando yezvivakwa zvekushongedza zvinhu, zvinonyanya kugadzirwa neiyo talc upfu uye glue. Icho chinhu chepasi chinoshandiswa kugadzirisa madziro uye kuyera. Inogona kuisa hwaro huri nani hwekushongedza maitiro. Kazhinji, putty poda yakarongedzwa nevhavha bhegi, iyo inowanzo kuve yakakamurwa kuita maviri marudzi, bepa uye yakarukwa zvinhu. Sezvo iyo putty poda inokanganiswa nyore nehunyoro, zvigadzirwa zvepurasitiki zvinowanzo kuwedzerwa muhomwe yekupaka kudzivirira hunyoro. Zvemufananidzo ...
Tsika 3ply Heavy Duty Kurongedza Kraft Pepa Mabhegi 25kg 20kg 50kg
Chigadzirwa Nhanganyaya Valve bhegi, inowanzozivikanwa seyama bhegi repasi, inodyiswa kubva kuchiteshi chevhavha kumusoro kwehombodo uye izere nemuchina wekuzadza. Mushure mekutakura zvinhu, chimiro chehombodo iri cuboid, inova inoshanda, yakachena uye yakanaka, nyore kutakura, yakasimba uye zvichingodaro. Iyi mhando yekupakira inoshandiswa kune akasiyana granular kana hupfu zvinhu. Iyo inowanzo shandiswa esimende uye kemikari kurongedza, iine mutoro weinenge 10-50kg. Chiteshi chekuzadza pamwe nekuisa chisimbiso basa chakarongedzwa ...